Filtrer les éléments par date : mercredi, 16 octobre 2019
mercredi, 16 octobre 2019 21:43
Belgrade – Serbie: Ambohimpihaonan’ny Parlemantera manerantany
Natao tao Belgrade renivohitr’i Serbie ny 13 ka hatramin’ny 17 oktobra 2019 teo ny fihaonambe faha-141 ny Fivondronan’ny Parlemantera manerantany. Mandray anjara amin’izany i Madagasikara amin’ny alalan’ny solombavam-bahoaka isany:
Rabenirina Jean Jacques, filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena sady nitarika ny delegasiona ; Rafenomantsoa Tsirimaharo Ny Aina, mpampakateny ankapobeny eo anivon’ny Antenimieram-pirenena; Raharimampionona (Ikalamavony) ; Rasolomanana Beby Olivier (Mandritsara) ; Bernando Germain Berton Ndrianasy (Nosibe An’Ala) ary Randriamahafanjary Calvin, Sekretera jeneralin’ny Antenimieram-pirenena.
mercredi, 16 octobre 2019 21:23
Vavatenina: Sarona ny vola sandoka 20 tapitrisa Ariary
Fanomezam-baovao avy amin’ny olontsotra tonga teo anivon’ny Zandary tao Fenoarivo Atsinanana, fa misy olona mitondra vola sandoka 400 tapitrisa Ariary ho any Vavatenina
Nanao sakana-fitsirihana avy hatrany ny Zandary ka tratra tao Vavatenina, ny 15 oktobra 2019, ny fiara 4x4 pickup Ford Ranger iray izay nitondra vola sandoka 20 tapitrisa Ariary sy vola tena izy 80 tapitrisa Ariary.
Olona miisa dimy no efa voasambotra. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary manodidina ity raharaha ity.
mercredi, 16 octobre 2019 20:59
Rina Randriamasinoro: Miantso ny rehetra hiara-dalana aminy
« Tsy sangisangy ny fitantanana ny tanàna, fa mila fahavonona », hoy i Rina Randriamasinoro ao amin'ny pejiny Facebook. Ny fandehanako "naka traikefa" tany ivelany dia anisan’ny porofo fa "vonona aho" hampandroso ny tanàna.
Nanambara i Rina Randriamasinoro fa matipaika ankehitriny ny fandaharan'asany ka iantsoany ny rehetra hiara-dalana aminy amin'ny fanatanterahana izany.
Natao androany tao amin'ny foiben-toeran'ny antoko Tiako i Madagasikara ny fanolorana sy fitsofan-drano an'i Rina Randriamasinoro, kandida Ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, sy ireo kandida Mpanolontsain'ny tanàna miaraka aminy. Nitarika ny filoha nasionalin'ny antoko dia ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, nanotrona sy naneho fanohanana ireo kandida ihany koa ireo depiote Tiako i Madagasikara.
mercredi, 16 octobre 2019 19:36
Sefo Fokontany: Hisy fanoloana faobe ...
Misy fikasana hanolo sefo Fokontany amin'ny Kaominina maromaro. Efa mahoraka tamin'ity androany ity fa hosoloina ireo Sefo Fokontany eny amin'ny Kaominina Ivato, Distrika Ambohidratrimo. Voakasik'izany ihany koa ny eto Antananarivo renivohitra, toy ny efa nitranga nialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny mey 2019 sy nialoha ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018.
Araka ny loharanom-baovao, akaiky ny CENI, dia fantatra fa efa nangataka tany amin'ny ministeran'ny Ati-tany ny CENI mba tsy hanoloana ireo sefo Fokontany sy "Chef d'Arrondissement Administratif" amin'izao ankatoky ny fifidianana kaominaly izao, mba tsy hanakorontana ny zotram-pifidianana.
Tsy "Agent électoral" ny sefo Fokontany nefa kosa isany manatitra voka-pifidianana any amin'ny SRMV miaraka amin'ny delege.
mercredi, 16 octobre 2019 18:00
STK FJKM Antalaha: Fisedrana lehibe
Tra-doza tao Tsarahasina, tanàna anelanelan’i Mampikony sy Port-Bergé amin’ny lalam-pirenena faha-6, androany vao maraina be, ny fiarabe iray mpitatitra olona mampitohy an’Antananarivo amin’ny Faritra SAVA. Anisany mpandeha tao anatin’ity fiarabe ity, ireo STK FJKM Antalaha avy namonjy zaikabe tany Fianarantsoa. Tsy nisy aina nafoy, saingy maro ny naratra tamin’ireo mpandeha, izay efa tsaboina ao amin'ny hôpitaly ao Mampikony.
Fisedrana sa vokatry ny olana mekanika mety miseho ? Tratry ny lozam-pifamoivoizana toy izao ihany koa ny fiara nitondra ireto STK FJKM Antalaha ireto raha hiazo an’i Fianarantsoa hamonjy zaikabe ny herinandro lasa iny.
mercredi, 16 octobre 2019 10:52
Maroantsetra: Sasa-miandry ny tambinkaramany tamin’ny fifidianana ireo « Opérateurs de saisie »
Mitaraina ho tsy mbola nandray ny tambinkaramany ireo mpiasa nisahana ny fampidirana ny voka-pifidianana tamin’ny solosaina « Opérateurs de saisie » aty Maroantsetra. Na ny tamin’ny fifidianana filoham-pirenena taona 2018 io, na ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tamin’ny 27 mey 2019 farany teo, dia fampanantenana sy ny ampitso lava no valinteny azon’izy ireo avy amin’ny rantsamangaikan’ny CENI aty an-toerana.
« 80 Ariary isaky ny mpifidy no nifanarahana », ireo « Opérateurs de saisie ». «Izahay anefa nahavita 7 500 mpifidy isan’olona teo. Izany hoe : 600 000 Ariary ny karamanay izay mbola tsy nahazoana na dia Ariary », hoy hatrany ny fitarainana ka anairan’izy ireo ny tompon'andraikitra satria ho avy indray ity ny fifidianana Kaominaly amin’ny 27 novambra 2019 izao.
mercredi, 16 octobre 2019 10:47
Trangam-piarahamonina: Tovolahy, 30 taona, nitsoaka niaraka tamin'ny 20 tapitrisa Ariary avy nangalariny
Roa herinandro izao no nitsoaka niaraka tamin'ny vola halatra io tovolahy io. Voatery nosamborin'ny mpitandro filaminanana ny Rainy ary natolotra ny Fitsarana tany Antalaha.
Nahazo fahafahana vonjimaika io rainy io miandry ny fitsarana azy amin'ny 07 novambra 2019 taorian'ny fanaovana raharaham-pihavanana izay nanekeny tsy fidiny hizaka ny heloka nataon'ny zanany. Natao antoka ny trano fonenany sy tokontany mandrampahita ny vola 20 tapitrisa Ariary hanonerana ny volan'olona.
Tranga niseho teto Andranomatsiko Fokontany Antanifotsy 2, Kaominina ambonivohitr'i Sambava.
mercredi, 16 octobre 2019 10:46
16 octobre: Journée mondiale de la colonne vertébrale
16 octobre: Journée mondiale de la colonne vertébrale.
mercredi, 16 octobre 2019 10:39
16 octobre: Journée Mondiale de l'alimentation.